UYesu—Indlela Yokuphila Ubomi obonwabisayo
UYesu—Indlela Yokuphila Ubomi Obunenjongo
NGABA nyhani uYesu wayonwabile? Kuyabonakala ukuba wakhuliswa ngabazali ababengathath’ ntweni, ibe ngalo lonke ixesha lobomi bakhe wayengenazinto zingako. Phofu, ‘wayengenayo nendawo le yokufaka intloko.’ (Luka 9:57, 58) Ngapha koko, wayecatshukelwa, ethukwa de ekugqibeleni wabulawa ziintshaba zakhe.
Mhlawumbi xa usiva oku uthi, ‘Akunakuthiwa wonwabile umntu onjalo!’ Kodwa ke zininzi izinto ezenzeka kubomi bukaYesu yaye kuza kusinceda ukufunda ngazo. Makhe sithethe ngazo zibe ne.
1. UYESU WAYENENJONGO—EYAYIKUKWENZA UKUTHANDA KUKATHIXO.
“Okwam ukutya kukuba ndenze ukuthanda kondithumileyo.”—Yohane 4:34.
Ngamazwi nangezenzo zakhe, uYesu wayefuna ukwenza ukuthanda kukaYise wasezulwini, uYehova. * UYesu wayekuthanda ukwenza ukuthanda kukaThixo. Wade wakufanisa nokutya, njengoko esi sibhalo sicatshulwe ngasentla sibonisa. Makhe sibone ukuba kwakutheni ukuze afanise ukwenza ukuthanda kukaThixo kunye nokutya.
UYesu wawathetha la mazwi emin’ emaqanda. (Yohane 4:6) Ngokuqinisekileyo wayelambile, kuba wayechithe intsasa yonke ekhenketha kwelakwaSamariya. Phofu nabafundi bakhe bada bamcenga besithi: “Rabhi, yitya.” (Yohane 4:31) Impendulo kaYesu yabonisa ukuba kwakumhlaziya yaye kumenza abe namandla ukwenza ukuthanda kukaThixo. Ngaba oko akubonisi ukuba wayonwabile?
2. UYESU WAYEMTHANDA GQITHA UYISE.
“Ndiyamthanda uBawo.”—Yohane 14:31.
UYesu noYise wasezulwini babethandana ngeyona ndlela. Ukuthanda uThixo kwenza uYesu wafundisa abantu ngaye—igama Lakhe, iinjongo kunye neempawu zakhe. Ngamazwi, ngezenzo nangendlela awayecinga ngayo, uYesu wasifundisa ngobuntu bukaYise—kangangokuba uYesu nguYis’ ehleli. Kungenxa yoko uYesu wathi kuFilipu: “Lowo undibonileyo mna umbonile noBawo,” emva kokuba lo mpostile ethe kuye: “Sibonise uYihlo.”—Yohane 14:8, 9.
UYesu wayemthanda kakhulu uYise kangangokuba wayekulungele ukumthobela naxa kwakufuneka afe. (Filipi 2:7, 8; 1 Yohane 5:3) Ukuthanda uThixo kangako kwenza uYesu wonwaba ebomini.
3. UYESU WAYEBATHANDA ABANTU.
“Akukho bani unothando olukhulu kunolu, lokuba uthile anikezele umphefumlo wakhe ngenxa yabahlobo bakhe.”—Yohane 15:13.
Ikamva lethu thina bantu bangafezekanga limfiliba. IBhayibhile ithi: “Isono sangena ngamntu mnye [uAdam] ehlabathini nokufa ngaso isono, ngaloo ndlela ukufa kwasasazeka kubo bonke abantu ngenxa yokuba bonke bonayo.” (Roma 5:12) Asinakuze siwoyise ngamandla ethu umphumo wesono, okukufa.—Roma 6:23.
Okuvuyisayo kukuba uYehova wayilungisa le ngxaki ithwaxa uluntu. Wavumela uNyana wakhe ofezekileyo nongenasono uYesu ukuba abandezeleke aze afe, ukuze asihlangule esonweni nasekufeni. Ngenxa yokuthanda kwakhe uYise nabantu, uYesu wavuma ukunikela ngobomi bakhe obufezekileyo ukuze asihlangule. (Roma 5:6-8) Ukungazingci nokuba nothando olunjalo kwamenza wonwaba uYesu. *
4. UYESU WAYESAZI UKUBA UYATHANDWA NGUYISE.
“Lo nguNyana wam, oyintanda, endikholisiweyo nguye.”—Mateyu 3:17.
UYehova wawathetha la mazwi esezulwini xa kwakubhaptizwa uYesu. UYehova akazange ayifihle into yokuba uyamthanda uNyana wakhe. Yiloo nto uYesu waxelela abantu ukuba: ‘UBawo uyandithanda’! (Yohane 10:17) Ukwazi kukaYesu ukuba uyathandwa nguYise kwamnceda wamelana nokuchaswa nokugxekwa. Loo nto yamnceda wazola waza wanesibindi naxa wayeza kufa. (Yohane 10:18) Ngokuqinisekileyo ukwazi ukuba uyathandwa nguYise kwanceda uYesu wonwaba nangakumbi ebomini.
Kucace mhlophe ukuba uYesu wayonwabile. Kuyacaca ukuba nathi ininzi into esinokuyifunda kuye ngendlela esinokonwaba ngayo ebomini. Kwinqaku elilandelayo siza kufunda ngamanye wamacebiso uYesu awawanika abafundi bakhe ngokuphathelele ubomi.
^ isiqe. 15 Funda okungakumbi ngendlela okubaluleke ngayo ukufa kukaYesu, kwisahluko 5 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.